USuthu luphuce iChiefs iqatha - Ilanga News
Home Ezemidlalo USuthu luphuce iChiefs iqatha
USuthu luphuce iChiefs iqatha
Luhlabane ngobedlala e-Europe, kanti noJustin Shonga ujima nalo
UTERCIOUS Malepe obehola iqembu lesizwe lika-Under23 kuma-Olympics eJapan kubikwa ukuthi usejoyine AmaZulu FC.
UVELA ukuthi AmaZulu FC aphuce iqatha emlonyeni iKaizer Chiefs ehlabana ngoTercious Malepe (24) obegaqelwe yiziMpofana.
ILANGA lithole ngomthombo walo oncikene kakhulu noSuthu ukuthi uMalepe ungomunye wa-badlali abasha abazothulwa yile kilabhu esigcawini nabezindaba esihlelelwe ukuba namuhla ngo-Lwesine emini eThekwini.
Lesi sitobha besiyingxenye ye-qembu lakuleli lika-U/23 ebelimele izwe kuma-Olympic Games abe-ngo-2016 eRio, eBrazil. UMalepe unanesipiliyoni sokugijima phesheya kwezilwandle njengoba ephuma kwiMynai FC yase-Ukraine.
Abanye abadlali okulindeleke ukuba bethulwe noMalepe ngu-Philani Zulu oyisitobha osuka kwiChiefs ethathe uSibusiso Mabiliso oSuthwini, uKeagan Buchanan noMxolisi Kunene abaphuma kwiMaritzburg United.
Omunye umdlali ojima noSuthu nguJustin Shonga waseZambia obekwiCape Town City ayijoyine emuva kokuchithwa yi-Orlando Pirates.
Uma egcine ngokwethulwa no-Shonga, uzohlangana nomkhaya wakhe u-Augustin Mulenga abebe-yibambe naye kwiBucs.
Laba badlali kulindeleke ukuba baqinise isikwati soSuthu njengoba lulungiselela ukumela iNingi-zimu Afrika kwiCaf Champions League.
Omunye umdlali phambilini obekuvele ukuthi uxoxa noSuthu, nguWillard “Salt & Vinegar” Katsande ogcine esayiniswe yi-Sekhukhune United inkontileka yonyaka emuva kokuba imnike imali elingana nabeyithola kwi-Chiefs okuvele ukuthi beyifuna ukumnika isikhundla sokuba ngusomaqhinga kodwa wasenqaba ngoba esazimisele ngokudlala ibhola.
USuthu kulindeleke ukuba luphinde lwethule ijezi elisha namuhla kanjalo nabaxhasi abasha. ILANGA lithole ukuthi aba-xhasi boSuthu bazokuba wu-11 sebebonke uma sekwethulwe nabasha.
Leli phephandaba lithinta uPhumlani Dube wezokuxhumana oSuthwini ngalolu daba, uqinise-kise indaba yesigcawu sanamuhla kodwa wala waphetha ukuqinise-kisa indaba yabadlali ezeseka ngokuthi ngeke sisaba khona isidingo sokumemezela uma konke seku-semphakathini.
Uthe leli phephandaba kumele lihambele lo mcimbi ukuzozico-shela okuzokwenzeka. Uqinisekise nokuthi kuzoklonyeliswa nabadlali ngokwenza kahle ngesizini edlule.
Previous articleIChiefs iguqise i-pirates kowendebe
Next articleUthishanhloko usolwa ngokuphatha budlabha imali